လမ်းမမှာ တုံတုံချိချိနဲ့ ရေခဲချောင်း ရောင်းနေရှာတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်ကို စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြရင်း ကူညီမှုတွေ ပေးခဲ့တဲ့ မိုးစက် – CELE WINGAGAR
လမ်းမမှာ တုံတုံချိချိနဲ့ ရေခဲချောင်း ရောင်းနေရှာတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ဦးရဲ့ အဖြစ်ကို စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြရင်း ကူညီမှုတွေ ပေးခဲ့တဲ့ မိုးစက်
September 30, 2021 100million Articles 0
မိုးစက်က လတ်တလောမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာသမားတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ကူညီလှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေ သူတစ်ယောက်ပါ ။ မိုးစက်က ကိုယ်တိုင်လည်း ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးလေးတွေစုပေါင်းပြီး လှူဒါန်းသလို အများစုပေါင်းအလှူတွေမှာလည်း လုပ်အားဒါနတွေကူညီလေ့ရှိပါတယ် ။
အခုလည်း လမ်းသွားရင်း တုံတုံချိချိနဲ့ ရေခဲချောင်းရောင်းနေတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ဦးကို တွေ့ပြီး လူသားချင်း စာနာစွာ ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ အဖိုးက တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုံမှာနေထိုင်ပြီး တစ်နေ့ကိုရေခဲထုပ် အကုန်ရောင်းရမှ ကိုးထောင် ကျပ်သာရရှိတယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ် ။
မိုးစက်လည်း အဖိုးကို သနားပြီး ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့ပုံကို ” ဒီ ဘဘ က တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံထဲက ရေခဲထုပ်ရောင်းတဲ့ ဘဘပေါ့…။ ဘဘရေခဲထုပ်တွေ လှူဖူးလား. ???”3/4 ထုပ်အပြင် ပိုမလှူဖူးပါဘူးသားရယ်…”ရေခဲထုပ်က ဘယ်လောက်ဖိုးလောက်ပါ ” ၉၀၀၀ ဖိုးလောက်တော့ရှိဦးမယ်ထင်တယ်” သားဆီမှာပါတဲ့ ၅၄၀၀၀ ဘဘကိုကန်တော့မယ် ဘဘ သားနဲ့အတူ ရေခဲထုပ်တွေလှူမလား” လှုမှာပေါ့သားရယ် ဘဘလဲ အဲ့လို လှူရတာ သိပ်ပျော်တာ…”တဲ့။ တကယ်ပျော်စရာကြီးပါဗျာ…။ ဘဘလဲပျော် …ကျွန်တော်လဲပျော် စားသုံးကြသူတွေလဲပျော်။ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ သက်ကြီးအဖိုးအဖွားတွေ ဈေးရောင်းတာတွေ့ရင် အားပေးကြဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ” ရေးသားထားရာ ဖတ်ပြီး ကြည်နူး ပီတိဖြစ်မိတာကြောင့် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
လမ္းမမွာ တုံတုံခ်ိခ်ိနဲ႔ ေရခဲေခ်ာင္း ေရာင္းေနရွာတဲ့ အဖိုးအိုတစ္ဦးရဲ႕ အျဖစ္ကို စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာျပရင္း ကူညီမႈေတြ ေပးခဲ့တဲ့ မိုးစက္
ႏိုးစက္က လတ္တေလာမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့ အႏုပညာသမားေတြကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန ကူညီလႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေန သူတစ္ေယာက္ပါ ။ မိုးစက္က ကိုယ္တိုင္လည္း ရရွိတဲ့ အႏုပညာေၾကးေလးေတြစုေပါင္းၿပီး လႉဒါန္းသလို အမ်ားစုေပါင္းအလႉေတြမွာလည္း လုပ္အားဒါနေတြကူညီေလ့ရွိပါတယ္ ။
အခုလည္း လမ္းသြားရင္း တုံတုံခ်ိခ်ိနဲ႔ ေရခဲေခ်ာင္းေရာင္းေနတဲ့ အဖိုးအိုတစ္ဦးကို ေတြ႕ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာစြာ ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္ ။ အဖိုးက ေတာင္ဒဂုံ စက္မႈဇုံမွာေနထိုင္ၿပီး တစ္ေန႔ကိုေရခဲထုပ္ အကုန္ေရာင္းရမွ ကိုးေထာင္ က်ပ္သာရရွိတယ္လို႔ လည္း ဆိုပါတယ္ ။
မိုးစက္လည္း အဖိုးကို သနားၿပီး ကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးျဖစ္ခဲ့ပုံကို ” ဒီ ဘဘ က ေတာင္ဒဂုံစက္မႈဇုံထဲက ေရခဲထုပ္ေရာင္းတဲ့ ဘဘေပါ့…။ ဘဘေရခဲထုပ္ေတြ လႉဖူးလား. ???”3/4 ထုပ္အျပင္ ပိုမလႉဖူးပါဘူးသားရယ္…”ေရခဲထုပ္က ဘယ္ေလာက္ဖိုးေလာက္ပါ ” ၉၀၀၀ ဖိုးေလာက္ေတာ့ရွိဦးမယ္ထင္တယ္” သားဆီမွာပါတဲ့ ၅၄၀၀၀ ဘဘကိုကန္ေတာ့မယ္ ဘဘ သားနဲ႔အတူ ေရခဲထုပ္ေတြလႉမလား” လႈမွာေပါ့သားရယ္ ဘဘလဲ အဲ့လို လႉရတာ သိပ္ေပ်ာ္တာ…”တဲ့။ တကယ္ေပ်ာ္စရာႀကီးပါဗ်ာ…။ ဘဘလဲေပ်ာ္ …ကြၽန္ေတာ္လဲေပ်ာ္ စားသုံးၾကသူေတြလဲေပ်ာ္။ အတုယူစရာေကာင္းတဲ့ သက္ႀကီးအဖိုးအဖြားေတြ ေစ်းေရာင္းတာေတြ႕ရင္ အားေပးၾကဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္။ ” ေရးသားထားရာ ဖတ္ၿပီး ၾကည္ႏူး ပီတိျဖစ္မိတာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။
လတ်တလော ခေတ် စားနေတဲ့ Hometown Cha Cha Cha Series ထဲ က OST Song လေးကို Cover ပြန်ဆိုပြခဲ့တဲ့ အေးမြဖြူ
သံဃာတော်များနဲ့ ဆွမ်းခံ လိုက်ပေးကာ ကုသိုလ် ကောင်းမှုပြုရင်း အလှူအတန်းများပါ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ရဲလေးမ